I-Bovine Heparin, iHalal Heparin, Ukulungiselela kweDalteparin - CSBIO
I-Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2000. Ngomhlaka 19 Agasti 2011, inkampani yabhalwa emakethe ye-Growth Enterprise ye-Shenzhen Stock Exchange (stock code 300255). Le nkampani inezisekelo ezine zokukhiqiza, izinkampani eziyisishiyagalolunye zokuxhasa, izinkampani ezimbili zaphesheya kwezilwandle, kanye nezinqubo ezimbili ezihlanganyelwe. Le nkampani ingubhizinisi bamakhemikhali we-biochemical, ahlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nokuhweba nokungenisa nokuthengisa kwamanye amazwe. Kuyinkampani ephambili yobuchwepheshe obukhulu enemikhiqizo evela emikhiqizweni engajwayelekile ye-heparin ukuya kuma-hepatin aphansi wesisindo se-heparin kanye ne-heparin yezentengiselwano ezigcwele emkhakheni we-heparin, nenkampani yemithi ehamba phambili ekwenziweni kwemikhiqizo ye-heparin yasekhaya.
Izinga lokusinda, ukuphathwa kokusebenza kahle, ubuqotho nodumo, ukuqamba kanye nentuthuko.
Ifektri yethu ikhule yaba ngumkhiqizi oqinisekisiwe wePrimon wekhwalithi ephezulu, Imikhiqizo Esebenzisa izindleko
Le nkampani ingubhizinisi bamakhemikhali we-biochemical, ahlanganisa ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa, kanye nokungenisa nokuhweba kwamanye amazwe
Septhemba 28, 2000
Inani lamalungelo obunikazi
Izigidi ezingama-68 zamadola
Ukuthengiswa okuphelele ku-2019
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. yasungulwa ngonyaka ka-2000.
U-Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. (kulokhu obizwa ngokuthi yi "Company") umthombo we-bovine heparin sodium raw kanye ne-heparin sodium injection wadlula i-Shandong Halal Certification Service Co, Ltd. (SHC) ukuhlolwa kwe-site e-Shandong Halal. I-HAS23000 ne-MS1500: 20 ...
I-Csbio: Wanikela Ngaphezulu Kwezigidi Ezi-2 Yuan Wemithi Ye-Heparin Ukusiza Ukuvimbela nokulawula isifo
Izindaba Zokuphepha ZaseShanghai zaseShanghai News China Security Security News ngoFebhuwari 27, uHebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co, Ltd. zinikele ngaphezu kwe-2 million yuan kwiRed Cross Society yesiFundazwe saseHubei. Le mishanguzo iyizidakamizwa zonke ze-heparin ezidingeka ngokushesha ekwelapheni iziguli ezine-pneumonia entsha ye-coronary ...
Njengamanje, inkampani isiqede umsebenzi ofanele wokucwaningwa kwemitholampilo kwesiGaba II nokulungiswa kwesivivinyo somtholampilo weSigaba III sokulimala kwe-Albenatide. Ngokusho kwemiphumela yokuhlolwa kwecala lokwelashwa sokuqala kanye nezidingo zokuvunywa kokuhlolwa komjovo we-Albenatide, kuhlangene nalokho uqobo ...